Jwxo-shiil oo Aanu Ogaanay in uu Dalka Ingriiska ku Joogo Qabiilka Tunida – Rasaasa News
Jwxo-shiil oo Aanu Ogaanay in uu Dalka Ingriiska ku Joogo Qabiilka Tunida
Nov 27, 2009 Jwxo-shiil, somalia, TV, Universal
TV Caalamiga ah ee Universal, ayaa muddo ka saddex todobaad ka hor ah, waxaa uu waraysi ka qaaday Jwxo-shiil, waraysigaas oo ay wajiga ka fiiqeen dadweynihii su,aalaha waydiiyey Jwxo-shiil, cadeeyeyna in uu yahay dambiil, ay xitaa qireen dadkii aan hore ula socon dambigiisa, balse fiirsanayey habeenkaas TV. Su,aalihii la weydiiyey su,aal ku jirtay ayaa waxay ahayd Jwxo-shiilo horta adigu ma dhalasha Itobiyaan ayaad haysataa mise dhalasho Somali ah maxaad tahay? Jwxo-shiil, waxaa uu sheegtay in haystay haystana dhalasho Somali ah.
Hadaba, anaga oo ka duulayna jawaabta uu ka bixiyey su,aashaas, ayaa waxaa na shaki galisay madaama uu ninkani sheeganayo in uu yahay gudoomiye Jabhadeed, bal in aan ogaano wax uu is dhexdhigay waxa ka jira, madaama uu u ekaa nin wax qarinaya oo is lahaa armay arinta su,aashani gaadhaa wasaarada arimaha gudaha ee dalka Ingriiska. Waxayna dadku filayeen in uu yahay nin sheegtay in uu ahaa Janan ciidan badeed ah ama Ogadenian, sababta oo ah dad badan reer Ogadeeniya ah, ayaa waxay haystaan dhalasho ah in ay yihiin Ogaden loogana aqoonsan yahay dalalka reer galbeedka in ay ka yimaadeen dhulkaas laguna siiyey aqoonsi xaqootinimo.
Hadaba, dabagalkanagii ayaanu ku soo ogaanay waxyaabo badan oo ayna dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo dawlada warqada uu ku dhoofdhoofo siisay toona ogayn oo ah, in uu ka been sheegay ninka uu yahay. Jwxo-shiil, waxaa uu ahaa taliyihii hore ee ciidankii bada ee Somaliya, waxaana uu ka mid ahaa ragii aadka ugu dhaw dhawaa kaligii taliye Maxamed Siyaad Bare, waana wax aan dhici karin in uusan waxyeelo gaysan. Walow marar hore oo badana la sheegay in xeebihii ay deganaayeen ciidankii bada ee somaliya lagu xabaalay dad badan xili habeenimo ah, arintaas oo ay wali wadaan dacdaweeda dadkii ay ku jireen eheladoodu. Hadaba, su,aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay muxuu qarinayaa Jwxo-shiil, waxaa iman in la isweydiiyo wixii dhacay 21 sano ka hor.
Hadaba, isaga oo ka duulaya arimo uu isagu ogg yahay, balse ummada ka qarsoon ayuu goostay in uu qariyo ruuxa uu yahay, waxaana markii uu dalka Ingriiska galay sanadkii 1993, uu sheegtay magaca Maashir Cumar Cismaan, kuna dhashay degmada Marka, shaqadiisuna ay ahayd kaluumayste, qabiilkiisuna yahay Tuni. Arintan waa arin xaqiiq ah, oo aanu ka helay warqadii codsiga qaxootinimo ee uu qortay Jwxo-shiil, markuu qaxootiga codsanayey.
Waligii Jwxo-shiil, uma sheegin saaxiibadiis in la yidhaa magacaas mana la fahmi karo waayo wuu gaa gaabiyaa isaga oo ka dhigaya sida ay magacyada u gaagaabiyaan dalalka reer galbeedku, M O Osman.
Waxaan ognahay in madaxda dawladii jabtay ee Somaliya ay kuligood qaxooti ku wada yihiin dalalka reer galbeedka, mana jirto wax dhibaato ah oo loo gaysto, waabase lagu aqoonsadaa in ay ahaayeen dad madaxtinimo soo maray. Hadaba maxaad u malaysnayaan dadweynaha SOmalida Ogadeeniyow in uu u badalay Jwxo-shiil, magaciisa iyo qoladiisa, hadana uu u sheeganayaa in uu wato magaciisii saxda ahaa. Koley kobtan ku faahfaahin mayno ee waxaan la sugaynaa xiligeeda!
Waxaa kale oo jira arimo badan oo aan ka ognahay Jwxo-shiil, kuwaas oo aan ahayn arimo shakhsiyadeed [private] waayo ma fiicna in shakhsiga arimihiisa hoose laga waramo, balse waxaa jira arimo badan oo dunuub ah, oo muddo dheer ku soo dhex jiray hadii uu Somaliya joogay iyo hadii uu khalad ku soo dhex galay halganka Somalida Ogadeeniyab. Arimhaas oo u baahan in loo sheego dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo xigtadiisaba, si aanu ugu dhuuman Jwxo-shiil, kuna dhibaataynin ogaansho la,aan.
Brigadier General Tekle Kiflai oo Damiintay Siidaynta Jwxo-shiil
Guddoomiyaha JXSG oo Dadweynaha Somali Galbeed u Diraya Salaanta Ciidda Barakeysan